All Ebooks :: Malagasy :: Ireo Zanaka Mampidi-Doza (E BOOK)
HomeAll EbooksMalagasyIreo Zanaka Mampidi-Doza (E BOOK)
Ireo Zanaka Mampidi-Doza (E BOOK)
Ity boky ity dia dia-penin’i Dag Heward-Mills hafa indray ho an’ireo mpanompon’ Andriamanitra izay mamaky izany. Mamaly ireo fanontaniana mikasika ny fomba fitondrana ny fifandraisana manahirana misy eo amin’ ireo ray sy ireo zanaka lahy ity boky ity. Amin’ ny alalan’ ny fampianarana hita ato...
Ity boky ity dia dia-penin’i Dag Heward-Mills hafa indray ho an’ireo mpanompon’ Andriamanitra izay mamaky izany. Mamaly ireo fanontaniana mikasika ny fomba fitondrana ny fifandraisana manahirana misy eo amin’ ireo ray sy ireo zanaka lahy ity boky ity.
Amin’ ny alalan’ ny fampianarana hita ato amin’ ity boky ity dia hanalavitra ny ozona eo amin’ ny fiainana ianao ary hitondra fitahiana an’ ny tenanao. Olona miavaka ireo ray ilay mpanandratra ireo zanaka lahy sy ireo izay eo ambany fiarovany. Raha tsy misy ny ray dia tsy hisy ireo zanaka hanohy ny asa fanompoana ho an’ ny taranaka hafa.
Mamelana na maty araka ny fahaizanao mifandray amin’ ireo rainao ny antson’ Andriamanitra. Vakio ity boky ity koa ialao ny ozona mifandray amin’ ny tsy fanajana, tsy fankatoavana sy fifandraisana kely fotsiny amin’ireo ray.